Amrit Sufi, nitondra ny teny Angika tandindonin-doza amin’ny sehatra nomerika · Global Voices teny Malagasy
Manamora fahitana fiteny tsy ary fitaova,a ny fandraketana ny fiteny sy ny kolontsaina am-bava
Voadika ny 19 Avrily 2022 4:55 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, عربي, Español, English, English
Sary nomen'i Amrit Sufi ary nahazoana alalana.
Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: Ny 12–18 Aprily 2022, Amrit Sufi no hampiantrano ny kaonty Twitter ifandimbiasana @AsiaLangsOnline, izay mitrandraka ny fomba azo ampiasana ny teknolojia hamelomana aina indray ny fiteny Aziatika. Vakio bebe kokoa momba ilay fanentanana eto.
Amrit Sufi dia mpikaroka sady mpampianatra ambony miasa amin'izao fotoana izao amin'ny fampidirana ankihy ny fiteny sy ny kolontsaina am-bava tandindonin-doza. Mampiasa ny fiteny tandindomin-doza antsoina hoe Angika koa izy, izay fiteny Indo-Aryana ao amin'ny faritr'i Anga, izay tafiditra ao anatin'ny fanjakana Indiana Bihar, Jharkhand, sy Bengal Andrefana. Manana mari-pahaizana maîtrise amin'ny teny anglisy sy literatiora avy amin'ny Oniversite Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal any Uttarakhand, India, i Sufi ary niasa ho mpampianatra literatiora anglisy tao amin'ny Oniversite Doon, Dehradun. Niresaka tamin'i Sufi ny Rising Voices momba ny fahalianany amin'ny fampidirana ankihy ny kolontsaina.
Ny angika no heverina ho fiteny tranainy indrindra amin'ny fianakavian’ny fiteny Bengali ary be itovizana amin'ny Maithili. Atahorana ho lany tamingana any India ny fiteny toa ny Angika noho ny fanjakazakan'ny fiteny Hindi. Mino i Sufi fa ny fandraketana ny fiteny sy ny kolontsaina am-bava ho feo sy horonantsary no manampy amin'ny fampitomboana ny fahitana ny fiteny maro tsy dia manana loharano firy. Mba hitsapana izany, nandrakitra hira vakodrazana Angika vitsivitsy ho andrana izy.
Tamin'ny taona 2021, niasa ho mpandrindra tamin'ny tetikasa amboaram-pitaovana Fametrahana An-tsoratra ny kolontsaina Am-bava, izay vatsian'ny Orina Wikimedia vola, i Sufi. Niara-niasa tamin'ny mponina teratany sy ny manam-pahaizana ny tetikasa hananganana amboaram-pitaovana anjotra ahafahan'ny olona manesika media amin'ny fiteny tandindomin-doza, anisan'izany ny Angika. Hanampy amin'ny fandraketana bebe kokoa ny fiteny sy ny kolontsaina ny amboaram-pitaovana, ary hanampy ihany koa amin'ny famoronana fandraketana an-tsoratra sy dikantsoratra amin'ny horonantsary.
Niantsafa tamin'i Amrit Sufi tamin'ny mailaka ny Rising Voices. Nasiam-panitsiana ny antsafa mba ho mazava.
Rising Voices (RV): Mba lazao anay ny momba anao sy ny asa ataonao amin'ny fiteny.
Amrit Sufi (AS): Mpikaroka aho, manohy ny mari-pahaizana fifehezana ara-javakanto momba ny fiteny ao amin'ny Oniversite Jawaharlal Nehru (JNU), any New Delhi, India. Manana haizatra amin'ny maha akademika ahy amin'ny literatiora anglisy aho. Miasa amin'ny maha-mpikaroka mpanao fanadihadiana momba ny tranga any India ihany koa aho amin'ny tetikasa “Ilain'ny fitenin’ny vondrom-piarahamonina indizeny sy vitsy an'isa ny teknolojia azo antoka: tetikasa-pikarohana andraisana anjara” karakarain'ny Rising Voices.
Niaraka tamin'ny namako ao amin’ny Wikimedia, antsoina hoe Nitesh Gill, no namoronako amboaram-pitaovana handraketana ankihy ny kolontsaina am-bava ao amin'ny Wikimedia sy ireo sehatra anjotra hafa. Manome torolàlana amin'ny antsipiriany ny fomba fandraketana ny kolontsaina am-bava, ny fomba famoahana izany ao amin'ny Wikimedia Commons, mba hamoronana fandikana an-tsoratra sy hamoahana azy ao amin'ny Wikisource ilay amboaram-pitaovana.
Ankoatra ireo, manao fanitsiana tsy tapaka ho an'ny tetikasa famokarana Wikipedia Angika aho.
Fanasokajiana ny fiteny Angika. Pikantsary tao amin'ny Glottolog. BY 4.0.
RV: Manao ahoana ny toetry ny fiteninao amin'izao fotoana izao na an-jotra na ivelan-jotra?
AS: Fiteny marefo ny Angika araka ny lazain'ny Sarintanin'ny UNESCO maneho ny Fiteny Eran-tany Tandindomin-doza. Misy ny ezaka atao ampidirana izany ao anatin’ny fampianarana ambaratonga fototra, ambaratonga faharoa ary eny amin’ny oniversite. Mazàna no tsy maintsy mianatra fiteny faharoa ny mpampiasa ny fiteny Angika eo amin'ny lafiny fanabeazana sy toekarena. Na izany aza, miezaka ireo mpikatroka Angika mitondra izany amin'ny sehatra ankihy toy ny Wikipedia sy ireo tetikasa mitovy sy mifandraika, YouTube, ary amin’ny tranonkala natokana ho an'ny famoahana literatiora Angika. Toa miisatra anefa ny fitomboan'ny Angika amin'ny sehatra nomerika.
RV: Inona no antony manosika anao mba hahita ny fiteninao amin'ny sehatra ankihy?
AS: Ny Angika no be mpampiasa indrindra any Bihar, India. Betsaka ny fitsarana an-tendrony momba ny fanjakana, na ny fiselontselon'ny asan-jiolahy na ny tsy fahampian'ny fanabeazana. Mino aho fa mioripaka amin'ny fahavoazana ara-toekarena sy ny fampisehoana diso amin'ny fampitam-baovao no mahatonga ireo fitsarana an-tendrony ireo. Manantena aho fa ny fandravonana ny fampiasana ny (fiteny) Angika amin'ny habaka ankihy no hiantoka amin'ireo mpampiasa ny fiteny hatoky tena bebe kokoa amin’ny fiiziany amin'ny sehatra ivelanjotra sy an-jotra. Ny fanamafisana ny fiiziana sy ny fireharehana amin'zany noho izany no tena tanjona.
“Rimi Jhimi Paniya”, hira fampakaram-bady amin'ny teny Angika momba ny fanalam-baraka amin'ny tsy fahafahana mandoa vodiondry. Lahatsary navoakan'i Amrit Sufi tao amin'ny Wikipedia. CC BY-SA 4.0.
RV: Farito ny sasany amin'ireo fanamby manakana ny fiteninao tsy ho azo ampiasaina manontolo amin'ny aterineto.
AS: Ny tsy fahampian'ny fanoratana abidy no olana voalaza matetika momba ny fampiasana ny Angika amin'ny habaka nomerika izay hitako fa mampiaka-peo ireo mpikatroka amin'ny fiteny. Na dia nosoratana tamin'ny fampiasana ny abidy Kaithi ara-tantara aza ny Angika dia nosoratana amin'ny fampiasana ny abidy Devanagari malaza (mitovy amin'ny Hindi) izy io amin’izao fotoana. Tsy mahatanteraka ny tanjon'ny fanehoana ny feon'ireo zanatsoratra miavaka amin'ny fiteny Angika sasany ny fampiasana an'ity abidy ity; Voapetaka ho ‘fiteny fehezana Hindi‘ ihany koa izy. Fanamby mivandravandra iray hafa ny tsy fahampian'ny fitaovana sy loharano ankihy fampiasa amin'ity fiteny ity. Miteraka fiovana mandehahoazy amin'ny Angika mankany amin’ny Hindi/Anglisy izany.
RV: Araka ny hevitrao, inona no dingana mivaingana azo atao hanentanana ny tanora hanomboka hianatra ny fiteniny na hampiasa ny fiteniny hatrany?
AS: Tokony hisy ny politikan'ny governemanta izay mamorona asa ho an'ireo miteny Angika satria betsaka ny fifindra-monina ataon'ny olona mitady asa. Ny fanaovana ny fitaovana ankihy (loharano nomerika) ho vonona amin'ilay fiteny sy ny famolavolana Unicode hifanarana amin'ireo feo sy marika amin'ny fiteny no dingana voalohany tsara atao. Handrisika ireo mpisera ihany koa ny fiantohana ny fiarovana ankihy (nomerika) sy ny fitanan-tsiambaratelo.
Tamin'ny volana Novambra 2021, niara-nanentana ny andian-dahatsoratra Atrikasam-pikatrohana ankihy (nomerika) amin'ny Fiteny ho an'i India izay nokarakarain'ny Rising Voices i Amrit Sufi. Tamin'ny volana Desambra 2021 koa i Sufi nanatevin-daharana ny famelabelaran-kevitra Rising Voices tamin'ny fivoriana IGF-2021 Manangana amin'ny fomba wiki ho an'ny fiteny tsy ampy fitaovana-votoaty.